Ajụjụ - Changzhou Jiashun New Material Technology Co., Ltd.
Faiba glaasi Cloth
Pu ntekwasa akwa
Silicone ntekwasa akwa
Aluminum foil ákwà
akwa silica faiba glaasi akwa
vermiculite ntekwasa faiba glaasi akwa
Graphite ntekwasa faiba glaasi Fabric
faiba glaasi ịgbado ọkụ blanket
acryli ntekwasa faiba glaasi akwa
PTFE ntekwasa faiba glaasi akwa
Steel waya nrapado teepu
Ee, anyị chọrọ iwu mba ụwa niile ka ịnwee nke kacha nta na-aga n’ihu. Ọ bụrụ n ’ị na-achọ iregharị mana ọ pere mpe pere mpe, anyị na-akwado ka lelee weebụsaịtị anyị
Maka ihe atụ, oge ndu bụ ihe dị ka ụbọchị 7. Maka imepụta ihe dị ukwuu, oge mbu bụ ụbọchị 20-30 mgbe ị natara ego nkwụnye ego. Oge ndu na-adị irè mgbe (1) anyị natara nkwụnye ego gị, yana (2) anyị nwere ihu ọma ikpeazụ maka ngwaahịa gị. Ọ bụrụ na oge ndu anyị anaghị arụ ọrụ na oge ị ga - emechi, biko gafee ire gị maka ire ere gị. N'ọnọdụ niile, anyị ga-anwa igbo mkpa gị. Ọtụtụ mgbe anyị na-enwe ike ime ya.
Ebee ka akwa akwa silica ga-eji
Kedu ihe ekwesịrị ị paida ntị na usoro nke iji akwa mpempe akwụkwọ aluminom na mpempe akwụkwọ dị na mpụga